Indlela ye-OnePlus 7 yeZen kunye nee-APK ezirekhodayo zesikrini | I-Androidsis
Khuphela kwaye ufake i-OnePlus 7 yeNdlela yeZen kunye nee-APK ezirekhodayo zesikrini kwezinye iimodeli ze-OnePlus apha
El OnePlus 7 kunye OnePlus 7 Pro Beza ne-OxygenOS 9.5, inguqulelo yamva nje yolungelelwaniso lwenkampani eyongeza kwiimodeli zayo. Ngelixa isekwe kwi Android Pie, izisa amanqaku amatsha angekafumaneki kwiifowuni ezindala ze-OnePlus. Ezimbini ezo mpawu zezi Isikrini seRekhodi kunye neMowudi yeZen.
I-OnePlus sele iqinisekisile ukuba iZen Mode iza kuza kwi-OnePlus 6 kunye OnePlus 6T ngohlaziyo lwe-OTA. Akukho xesha libekiweyo lokuhlaziya okwangoku, kodwa Awunyanzelekanga ukuba ulinde ixesha elide ukufumana inqaku kwiimodeli ezindala.
AndroidPolice ingxelo yokuba Inqaku leNdlela yeZen isebenza kwizixhobo ezindala ze-OnePlus wakube ufake i-APK. Kuyafana nakwiRekhoda yeScreen. Ke konke okufuneka ukwenze kukukhuphela ii-APKs ngokudlula APK Mirror kwaye uzifake. Ekupheleni kwenqaku sishiya amakhonkco. (Fumanisa: I-OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: ukuthelekisa okunzulu)
Indlela ye-OnePlus 7 yeZen
Baye batsho Zombini iiapps azizukuvela kwi-drawer yeapp. Ukuzifumana, kuya kufuneka uvule ifayile ye- Utshintsho olwenziwe ngokukhawuleza kwaye ufumane iRekhoda yeScreen / Indlela yeZen Emva koko kuyakufuneka urhuqe iithayile kwezi sele zikhona. Ungaziqala apho, unike imvume, kwaye uziqwalasele ukuba zisetyenziswe kuqala.
Ngokwamagqabantshintshi, irekhoda yesikrini iye yavavanywa kwi-OnePlus 6T, OnePlus 6, OnePlus 5T, kunye ne-OnePlus 3T, ngelixa iZen Mode iqinisekisiwe ukusebenza kwi-OnePlus 6 / 6T nakwi-OnePlus 3T.
Qaphela: Qaphela ukuba zombini ezi zixhobo azinakusebenza ukuba usebenzisa iROM yesiko kwizixhobo ezichazwe apha ngasentla.
Khuphela i-OnePlus 7 Zen Mode APK apha
Khuphela i-OnePlus 7 Screen Recorder APK apha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Khuphela kwaye ufake i-OnePlus 7 yeNdlela yeZen kunye nee-APK ezirekhodayo zesikrini kwezinye iimodeli ze-OnePlus apha
I-Samsung Galaxy S11 sele ikhulile phantsi kwegama lekhowudi elithi 'Picasso'
Imowudi emnyama ikwafumaneka kwikhalenda kwi-Android